A Complete Guide To The Border Collie Australian Shepherd Mix. Ihe omuma - Dịrị
A Complete Guide To The Border Collie Australian Shepherd Mix. Ihe omuma
Crossbreeding onye Australia Onye Ọzụzụ Atụrụ na Oke Collie emeela ka e nwee onye nwere ọgụgụ isi na-arụsi ọrụ ike; Border Collie Australian Ọzụzụ Atụrụ.
Bredị nne na nna abụọ bụ ndị mbụ bred dị ka nkịta na-arụ ọrụ (iji zụọ ehi na atụrụ) ma jiri ha mee ihe maka nrubeisi ha.
Border Collie na-ahọrọ dị ka nkịta kasị nwee ọgụgụ isi , ya mere, ọ bụghị ihe ijuanya na nsonaazụ ndị ahụ dịkwa aghụghọ na ngwa ngwa-mmụta.
Ngwurugwu a na-ebu ọkara nwere ike ime ezigbo mgbakwunye na ezinụlọ ezinụlọ yana ịkwado ndụ nke nkịta na-arụ ọrụ.
Ha anaghị adabara ụlọ ndị nwere oke ohere, n'ihi ọkwa dị elu ha na mkpa maka mkpali nke uche, agbanyeghị nke a na-arụsi ọrụ ike ma kwesị ntụkwasị obi nwere ike bụrụ naanị ihe ụlọ gị na-achọ.
Ka anyị lee anya otú ịhụnanya ‘Border-Aussie’ si bịa na ihe ha chọrọ iji nwee obi ụtọ na ahụike.
Gịnị Bụ Akè-ala Collie Australian Ọzụzụ Atụrụ Mix?
Onye Ọzụzụ Atụrụ Australia
Border Collie Australian Shepherd Mix ppmụ nkịta
Ókè-ala Collie Australian Shepherd Mix Personality
Border Collie Australian Shepherd Mix Size na Ọdịdị
Oke tozuru oke
Border Aussie Nlekọta Nlekọta
Zụ nkịta na-azụ anụ
Ebu ụzọ jikọta Border Collie Onye Ọzụzụ Atụrụ Australia maka ịzụ anụ ụlọ.
The Border Collie Australian Shepherd Mix bụ a ngwakọ atụrụ ebe nne na nna di iche-iche aburula ndi na-achikota umu anumanu dika aturu na ehi n'ugbo na ebe anumanu.
Site na umu anumanu abuo nke ndi ozo, obughi ihe ijuanya na ngwakọta nke nkpuru abuo na-emeputa ihe ndi nwere uche.
Border Aussie na-eguzosi ike n'ihe, na-erube isi ma na-agakwa n'ihu.
Ọbụna dịka anụmanụ ibe, a na-ahụkarị ha ka ha na-agba mbọ ịzụrụ ezinụlọ ha site n'ịgbagharị gburugburu gburugburu tupu ịda n'ala .
Typedị omume a na - eme ka ihe e bu ụzọ zụọ ha na-eme ka ọ pụta ìhè ma na - egosipụtakwa otu mmụọ ebumpụta ụwa ha siri sie ike.
Iji nyochaa akụkọ gbasara ngwakọ, ọ dị mkpa ka ị mara nke ọma gbasara ụdị nne na nna ọ bụla:
Otutu ala nna ochie nwere ike ịchọta otu nkịta stud a na-akpọ Old Hemp nke biri n'ebe ugwu England na 1890s.
Old Hemp bụ atụrụ dị irè nke na enwere otutu ihe maka ụmụ nkịta ya bụ ndị ga-enwe olileanya iketa agwa ya nwere ọgụgụ isi na nrube isi.
N'ihi ya, Old Hemp mụrụ ihe dị ka mkpụrụ 200 wee nwee mmetụta dị ukwuu na ewu ewu ụdị a nke bịara na US na 1920s.
Na akụkọ ihe mere eme nke Onye Ọzụzụ Atụrụ Australia n'aka nke ọzọ, nwere obere nghọta.
Ha abụghị ndị Australia ma ọlị! Emepụtara ụdị ahụ n'ezie na West nke America na njedebe narị afọ nke 19.
A mara ụdị a na aha dị iche iche dị iche iche:
Onye Ọzụzụ Atụrụ Spanish
Onye Ọzụzụ Atụrụ ọhụrụ Mexico
Onye Ọzụzụ Atụrụ Californian
Ekwenyere na ha sitere na mpaghara ala n'etiti France na Spain ebe ha rụrụ ọrụ maka ndị nkuzi Basque bụ ndị mechara kwaga Australia, ma mesịa gaa US.
N'agbanyeghị akụkọ mgbe ochie nke ụdị nne na nna nke edere nke ọma, amabeghị ụzọ izizi nke ụdị abụọ a.
A na-ahụta Border Collie Australian Shepherd Mix site na klọb ndị na-esonụ:
American Canine ngwakọ Club
Okike Nkịta ulo nkita
Ndepụta Canine International Designer
Ndi American Kennel Club amataghi ha, ma obu ndi uloru nke ulo UK na ha abughi nkita di ọcha.
Beingbụ onye nwere okwukwe pụtakwara na ọ bụghị mgbe niile dị ka ihe na-achọsi ike dị ka ndị ibe ha dị ọcha .
Ọ bụ ezie na enwere ọtụtụ klọb gọọmentị maka klọb ndị na-adịghị ọcha, klọb gọọmentị maka obe na klọọkụ na-adịkarịghị, yabụ ngwakọta ìgwè a enweghị ụlọ ọgbakọ a ma ama.
Border Collie Australian Shepherd Mix Ama
Nha 19-23 sentimita (nwoke) na 18-21 sentimita (nwanyị)
Ibu ibu 35-65 lb (nwoke) 30-50lb (nwanyi)
Afọ ndụ 10-17 afọ
Nzube Mkpakọrịta Dog & Herding
Adabara Ndi oru ugbo nke choro nkita nkita, ndi na-acho akwukwo / Flyball, ndi ezin'ulo ha
Agba dị iche iche Black / White, Red, Red Merle, Blue Merle, Red Tricolor, Ka Nwere Tan Markings
Iwe Ike, ọgụgụ isi, Onye na-eguzosi ike n'ihe, Lekwasị anya, Na-ahụ n'anya
Aha ndị ọzọ Ókè-ala Aussie
Nkịta a nwere ike ịme ezigbo anụ ụlọ.
Maka ókèala oke, oke nha nwere ike ịdị n'etiti ụmụ nkịta 4 na 8 na maka ndị Ọzụzụ Atụrụ Australia, nha ahịhịa na-eme ka ibu ; Nwa nkịta 6 to 9.
N'ihi ya, n'agbanyeghị nke izu bu sire or dam , litters nwere ike ịbụ ebe ọ bụla n'etiti nkịta 4 na 9.
Onye ọ bụla Border Collie Australian Shepherd Mix nwa nkita ga-efu ihe ruru $ 1,000 USD ha ga-adị njikere maka ụlọ ọhụrụ ha n'ihe dị ka izu asaa ma ọ bụ asatọ.
Ha ga- rute oke ha n'ihe dị ka ọnwa 12-15.
Dika ha bu uzo agwakọtara, ọ nwere ike isiri ike ịchọpụta etu ha ga-esi buru ibu n'ọtụtụ ọkwa nke mmepe n'ihi na nke a ga-adabere n'ụdị nne na nna ha.
Agbanyeghị, na-elele ọnụ ọgụgụ dị arọ nke Border Collie na Onye Ọzụzụ Atụrụ Ọstrelia, anyị nwere ike ịtụle ịdị arọ na eserese uto ndị a:
Size nke nwanyị (lb)
Ogologo nwoke (lb)
Izu asatọ 5-9 5-9
Ọnwa 3 11-21 12-26
Ọnwa isii 20-39 23-49
Ọnwa 9 25-50 28-65
Ọnwa iri na abụọ 28-43 30-67
N'okpuru ebe a bụ ndepụta nke ndị nnapụta na US nke enwere ike ịlele oge niile maka mgbakwunye ọhụrụ ọ bụla nke nwere ike ịgụnye Border Aussie otu ụbọchị nke ga-eme mgbakwunye dị egwu na ndụ mmadụ:
Ezigbo Enyi Animal Society
Olileanya maka wskwụ
Mgbe a na-ekwu maka ọnọdụ nke crossbreed, ọ dị mkpa icheta nke ahụ ọ bụla nkịta bụ onye onye nwere ike iketa njikọta niile nke ezigbo agwa na njiri mara nke nne na nna ọ bụla.
N’okwu a, agwa ndị nne na nna yiri nke ọma, yabụ ndị nwe ha nwere ike olile anya lelee ezigbo amụma nke agwa ha Border Collie Australian Shepherd Mix.
Ndị nwere ike ịtụ anya ya nkịta nwere ọgụgụ isi , onye nwere oke mkpali ịrụ ọrụ ụbụrụ ya yana ahụ.
A maara maka ịgba ọsọ nke ọma; ọgụgụ isi ha pụtara na ha nwere ike na-agwụ ha ike ngwa ngwa.
N'ikwu nke a, ha na-enyekwa ezinụlọ obibi ụlọ na ụmụaka ebe ha nwere ume dị ukwuu, ma mgbe ha na-emekọrịta ihe n'ụzọ ziri ezi, ha nwere ezigbo ọfụma ma na-egwuri egwu na ụmụaka.
Inggba aghara na ịkwa ákwá na-adịkarị obere na ụdị a, ọ ga-abụ na ọ ga-eme mgbe ụfọdụ na mmeghachi omume na ihe na-akpali ha.
Otu ọgụgụ isi nwere ọtụtụ ume ọkụ na oke ịhụnanya inye.
Nkịta a bụ agbụrụ ndị enyi na enyi na ụmụ mmadụ; ọ bụrụ na ejikọtara ha n'ụzọ kwesịrị ekwesị na mgbe a na-ekweghị ka ha chebe ya.
Border Collie x Onye Ọzụzụ Atụrụ Australian, ndị haziri nke ọma , na-agbakwụnye mgbakwunye dị ebube nye ezinụlọ ndị nwere ụmụaka toro eto na ụmụaka n'ihi ikike ha nwere igwu egwu nke ọma ma mee ka ụmụaka daa mbà!
Dịka nkịta ibe ya, ngwakọta ndị a na-azụkarị na-adịkarị mma ma na-egwuri egwu na nkịta ndị ọzọ; ịzụ ha na ịchụ ha ruo mgbe ha niile gaferela.
Na-arụ ọrụ Border Collie Australian Shepherd Mixes, n'aka nke ọzọ, na-achọsi ike iso ndị nkịta na-amaghị ama na-akpakọrịta ma yabụ kwesịrị ịkpachara anya mgbe ị na-ewebata nkịta dị iche na nkịta na-arụ ọrụ naanị ya.
Site n'ịgba ike iji duru anụ ndị ọzọ, ụfọdụ n'ime nkịta ndị a nwere ike ọ gaghị adabara nke ọma ibi n'ụlọ ya na anụ ụlọ ndị ọzọ.
Nke a bụ n'ihi na o yikarịrị ka ha ga-achọ ịchụ ha ma kpụrụ ha banye n'ime oghere.
Igosipụta kwesịrị ekwesị, na ọzụzụ izizi dị irè (izere ịgbaso nsị mmụọ ha), nwere ike ibute ezinụlọ dị n'udo na anụ ụlọ ndị ọzọ; ma mmuo ozuzu ha siri ike ya mere a choro onye njikwa aka maka ụdị ọzụzụ a .
The Border Collie Australian Shepherd Mix bụ nkịta enyi na enyi n'ebe ụmụ mmadụ nọ yana anụmanụ ndị ọzọ ma nwee ike ịba ụba na ezinụlọ.
Dị ka o kwesịrị ịdị, onye nkịta a nwere mkpali siri ike ijikọta ihe - ma ọ bụ ìgwè ọkụkọ ma ọ bụ ìgwè mmadụ.
Ọ bụ ezie na ha amabeghị ihe na-agaghị emerụ anụ ụlọ ha na-azụ anụ, ọ nwere ike bụrụ na Border Collie Australian Shepherd Mixes sitere na usoro ọrụ siri ike, nwere ike ịba ụba anụ oriri.
Site na akụkọ ihe mere eme nke iso mmadụ na-arụkọ ọrụ, ụfọdụ nwere ike ichebe onye nwe ha ma mesịa ghara ịbụ ezigbo ndị enyi.
Enwere ike izere nke a ma ọ bụrụ na akpachabara anya , na ekpughere ọnọdụ dị iche iche mgbe ha bụ nwa nkịta, nke na-akụziri ha imezi agwa toro eto.
Imirikiti nkịta ndị a, bụ ndị ekpugherela nke ọma na mpụga ụwa, maara nke ọma na ịmata ọdịiche dị n'etiti ọnọdụ egwu na ọnọdụ egwu.
Ha bụ ndị nwere ọgụgụ isi ma na-egwuri egwu na nkịta na-achọ nza nke ahụ na uche.
Site n ’ụdị obe dị obere, ọ na-esiri ike ịkọ n’ ogo okenye.
E nwere ọtụtụ ihe ndị na-akpali akpali dị ka mmekọahụ, oke ndị nne na nna na mkpụrụ ndụ ihe nketa .
Ohaneze ị nwere ike ịtụ anya na okenye Border Collie Australian Shepherd Mix size gafere ebe ọ bụla n'etiti 30-50lb maka nwanyị na 35-65lb maka nwoke.
Femụ nwanyị nwere ike itolita na sentimita 18-21, ebe nwoke na-adịkarị ntakịrị karịa na sentimita 19-23.
Ha bụ a muscular nkịta n'ihi nnukwu ume ha.
Na ihu, a na-amata Bodị Collie Australian Shepherd Mix dị ka nkịta na-ajụ ajụ nwere uwe ogologo na-adịkarị feathering na ụkwụ, obi na afọ.
Ha nwere isi mesocephalic nwere floppy ntị na anya ha nwere ike ịbụ aja aja ma ọ bụ acha anụnụ anụnụ.
N'ihi nnukwu agba nke uwe agba na Onye Ọzụzụ Atụrụ Ọstrelia na Onye Ọchịchị Collie, ọ nwere ike isiri anyị ike ịkọ uwe agba nke Border Collie Australian Shepherd Mix puppies.
Agba nwere ike ịgụnye:
Nwa na-acha ọcha
Acha anụnụ anụnụ Merle
Ugba na mkpuchi
Ntutu isi ha dị larịị ma dị n'etiti ma yabụ na-achọ mmezi kwesịrị ekwesị.
Dị ka ọ bụ akwa, ihu igwe na-egosi uwe abụọ, ọ na-adịgide adịgide ma, ha ga-achọ brush zuru oke kwa izu iji mee ka mmanụ uwe ahụ kesaa ma gbochie matting ọ bụla.
A slicker ahịhịa kacha mma maka ọrụ a iji nwaa ntutu isi na akwa mkpuchi.
Ha nwere ike ịchọ a zuru oke ọ bụla ọnwa ole na ole iji hụ na uwe ime ha enweghị oke ntutu na-enweghị ntutu ma mee ka ha dị jụụ n'oge ọkọchị.
Ntucha ntu dị mkpa naanị na-eme mgbe ọ dị mkpa iji gbochie ha ịghọ ogologo oge na inwe ahụ iru ala.
Ugboro ezé na-asa ezé na-adabere na nri nkịta na ọnọdụ nke ezé. Ọ bụrụ na ha nọ n'ọnọdụ ọjọọ nke nwere ọtụtụ tartar, a ga-achọ brọsh kwa ụbọchị.
Ọ bụrụ na a na-enye nkịta gị nri na kibble akọrọ, yana ịnweta akara nkịta na-ata eze, ị ga-ehichapụ kwa ụbọchị agaghị achọ.
N'ozuzu, nkịta a kachasị mma maka ndị nkịta nwere ahụmahụ nwere ọtụtụ oge ha na nkịta ha nwere.
Nhazi njikwa achọrọ iji belata draịvụ na-eri anụ dị oke elu.
Ndị nwe ha ga-achọkwa mkpali dị ukwuu iji wepụta ọrụ ọhụụ na egwuregwu ụbụrụ iji gbochie ụdị ọgụgụ isi a gwụrụ ike.
Nduzi Kalori 1,100
Akara kibble, nri ugboro abụọ n'ụbọchị, bụ ezigbo nri maka Border Collie Australian Shepherd Mix.
Agbanyeghị, Aussie na-arụ ọrụ ga-achọ nri nke dị elu na protein inye ha ume na ume ha ga-achọ maka ịzụ atụrụ.
Nkịta na-arụ ọrụ ga-achọ ihe dị ka calorie 1,400 kwa ụbọchị, 300 karịa kwa ụbọchị karịa nkịta na-adịghị arụ ọrụ.
Wet nri nwere ike bụrụ ihe kwesịrị ekwesị maka nkịta na-arụ ọrụ (n'ihi protein a gbakwunyere), ọ bụ ezie na abụba dị elu metụtara nri mmiri nwere ike ịpụta kibble akọrọ kwesịrị ekwesị maka nkịta na-anaghị arụ ọrụ.
Mgbatị ahụ maka ụdị nkịta a kwesịrị ịdịru ihe dị ka nkeji 90 kwa ụbọchị.
Kwesịrị ịgụnye ịga ije, ịgba ọsọ na mkpali nke uche maka ụdị a, yana ịgagharị ebe ọhụrụ ma ọ bụ isi ọhụụ.
O doro anya na ọ dị ukwuu na ịzụ anụ , Border Collie Australian Shepherd Mix ga-adabara adaba iji mega ahụ na mpaghara sara mbara sara mbara ebe ha nwere ike ịgba ọsọ ọsọ dịka ha chọrọ.
Na traability nke ngwakọta a dị oke elu, ncheta ha dị ezigbo mma ma yabụ na mmega ahụ dị mma maka ụdị a iji nye ha ohere ịhapụ steam ka, ka anyị chee ya ihu - anyị agaghị echekwa ihu!
Mkpakọrịta ọha kwesịrị ekwesị dị oke mkpa maka nkịta nwere mmekọrịta nwere ezi mmekọrịta.
Positive mkwado bụ usoro ọzụzụ ọzụzụ kacha mara amara maka nkịta gị.
Ha bụ ndị mmụta ngwa ngwa, yabụ anaghị achọ ọtụtụ ugboro ugboro iji mụta omume ọhụrụ. Ha nwere ike rụọ ọrụ nke ọma na-amụta site na iwu olu ma ọ bụ akara aka - nke ọ bụla masịrị gị.
A Border Collie Australian Shepherd Mix ga-achọ ọtụtụ mkpali nke uche ka ọ na-achọ mgbe niile ihe ịma aka ọhụrụ na mgbagwoju anya iji merie.
Ndị nwe ya kwesịrị ịdị njikere mgbe niile ichepụta, ịchọta ma mepụta aghụghọ ọhụrụ maka nkịta ha ịmụ, ebe ọhụụ iji chọpụta na ihe omume ọhụụ ga-enye ọtụtụ echiche uche maka nkịta a nwere ọgụgụ isi .
Collie Eye Anomaly bụ ọrịa anya nketa na-emetụta Border Collies na ụfọdụ anụ atụrụ ọzọ.
Nke a na-akpata site na mmepe anya na-ezighi ezi nke anya ma nwee ike iduga ìsì. Ọ dị mwute ikwu na enweghị ọgwụgwọ maka ya, mana enwere ike ịme nyocha iji chọpụta ma nkịta emetụta, doro anya ma ọ bụ ụgbọelu.
Kwesịrị ị hụ na nne na nna Border Collie Australian Shepherd Mix doro anya.
Ntị ntị juru ebe niile na Border Collies, ya mere ọ bụ ihe egwu maka ngwakọta a. Otu ọmụmụ achọta njikọ dị n'etiti ntị chiri na agba uwe.
Ọ dị mwute ikwu na enweghị ọgwụgwọ maka ntị chiri na ọ na-apụtakarị mgbe nkịta dị afọ (gburugburu 4 afọ).
Hip dysplasia bụkwa ihe a na-ahụkarị na Ọzụzụ Atụrụ Australia na Border Collies na ọ bụ nsonaazụ nke nrụrụ nke oghere hip. Nke a nwere ike ibute ọrịa ogbu na nkwonkwo na-egbu mgbu; ọ bụ ezie na enweghị ọgwụgwọ, enwere ike idozi ya site na ndị na-egbu mgbu na hydrotherapy.
Border Collie Australian Shepherd Mix bụ ngwugwu nke ịhụnanya na ume.
Ndị na-eguzosi ike n'ihe na ndị nwere ọgụgụ isi, ha na-ewu ewu dị ka anụ ụlọ ezinụlọ n'ihi oke ọzụzụ na nrubeisi ha.
Echefula, ha na-achọ mkpali nke uche mgbe niile na nnukwu mmega ahụ nke ndị nwe ụlọ nwere ahụmịhe nwere ike bụrụ ihe kwesịrị ekwesị iji nye.
Border Aussie bụ nkịta na-achọ ịmata ihe ma hụ ihe ịma aka n'anya ka ọ ga-asọpụrụ itinye oge na iso onye nwe ha egwu.
The Border Collie Australian Shepherd Mix na-aghọwanye ewu ewu dị ka enyi enyi na ọ doro anya ịhụ ihe kpatara ya. Ì chere na ị nwere ihe ọ ga-ewe iji bulie otu?
Shichon (Teddy Bear Dog) Ozi Nzuzo
ọle ọ tọ bụdu iphe ọdo
oke ngwakọta ụlọ nyocha collie
ole ụra nwa nkita dị izu asatọ chọrọ
aha maka ndị ọzụzụ atụrụ German
nwa atụrụ Australia siberian husky mix ụmụ nkịta